“အေးချမ်းအား အမြီးလှန်ချိုးခြင်း” | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဒေါက်တာအေးချမ်းရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားခဲ့သော The Development ofaMuslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar) စာတမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် အနုစိတ် ဝေဖန်ချေပထားသော “Racism to Rohingya in Burma; Aye chan’s “enclave” with “influx viruses”” ဟူသည့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင် ပါမောက္ခ Dr Abid Bahar မှ ရေးသားပြုစုခဲ့သည့် စာတမ်းအား “အေးချမ်းအား အမြီးလှန်ချိုးခြင်း”ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာပြန်အား တဖြည်းဖြည်းခြင်း တင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
ဒေါက်တာအေးချမ်းရဲ့ စာတမ်းမူရင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင် ပါမောက္ခ Dr Abid Bahar ရဲ့ အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာဖြင့် အနုစိတ် ဝေဖန်ချေပထားတဲ့ စာတမ်းမူရင်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း။
ဒေါက်တာအေးချမ်းသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ သမိုင်းစစ်၊ သမိုင်းမှန်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်တွေကို ဖျက်စီးပစ်ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများ၏ သမိုင်းစစ်၊ သမိုင်းမှန်ကို မြန်မာပြည်သူလူထုကြီး နားမလည်အောင်၊ “အ”သွားအောင် သူ့ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်လို ကြောက်စရာကောင်းပြီး လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော ရခိုင်သမိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အရေးအသားများနှင့် ပြုစားထားခဲ့ပါသည်။
The International Association of Genocide Scholars ၏ ဥက္ကဌဟောင်း Professor William Schabas မှ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “When you see measures preventing births, trying to deny the identity of the people, hoping to see that they really are eventually, that they no longer exist; denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live, these are all warning signs that mean it’s not frivolous to envisage the use of the term genocide.”
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ သမိုင်းကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကြီး၏ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာကောင်းသော လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟူသော အချက်အရ ဒေါက်တာအေးချမ်းသည် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကြီး (Genocide Crime) ကို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ သမိုင်းစစ်၊ သမိုင်းမှန်အား ငြင်းပယ်ခြင်းဖြင့် ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ် သုံးပါးစလုံး ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ အာမီးန်။
This entry was posted on January 14, 2013, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှားပါးဓါတ်သတ္တုတွေ တွေ့ရှိ
နိုင်ငံသားရပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုလျှင် အကြမ်းဖက်ခံရမည်ဟုဆို →